Doon ay Saarnaayeen 600 oo Tahriibayaal ah oo ku Qarqoontay Xeebaha Dalka Masar – Xeernews24
Doon ay Saarnaayeen 600 oo Tahriibayaal ah oo ku Qarqoontay Xeebaha Dalka Masar
21. September 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
September 21 (XeerNews24)— Ugu yaraan 29 ruux ayaa ku geeriyootay inta la xaqiijiyay kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku degtay xeebaha dalka Masar iyadoo la la’ yahay inta badan dadkii saarnaa doontan halka tiro dad ah laga soo badbaadiyay.
Doontan ayaa la sheegay in ay saarnaayeen lix boqol oo ruux kuwaasoo 150 ka mid ah la soo babaadiyay sida ay warbaahinta dalka Masar ay sheegeen.
Wararka ayaa sheegaya in doontan ay ku degtey xeebta Kafr al-Sheikh sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin u hadashay dowlada Masar.Wasaarada caafimaadka dalka Masar ayaa laga soo xigtey in dadka ku dhintey ay ka mid ahaayeen dad u dhashay dalka Sudan iyo dalal kale.
Shilkan dhacay maanta ayaa imaanaya xilli ay hay’adaha xuduudaha u qaabilsan Yurub galootiga ah oo ka soo gudbaya dalka Masar. Doontan degtey ayaa la sheegay inay saarnaayeen dad qaxooti ah oo ka soo jeeda dalalka Siiriya,Masar iyo wadamo Afrikaa ah sida ay u sheegeen Reuters ilo muhiim ah.
Illaa iyo hadda lama sheegin halka ay doontan ay ku sii jeeday iyadoo hase ahaatee la sheegayo in ay u badan tahay in dalka Talyaaniga ay doonayeen qaxootigan inay galaan. Sidoo kale lama cadeyn in dadka ku dhintey ama weliba la la’ yahay inay ka mid ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/images-2.jpg 156 206 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-09-21 17:23:042016-09-21 17:23:04Doon ay Saarnaayeen 600 oo Tahriibayaal ah oo ku Qarqoontay Xeebaha Dalka Masar
Madaxweyne Xassan Sheekh oo gashaanka u Daruuray Wareejinta Dekada Barbara Amisomka Djibouti iyo Al shaabab oo mar kale is fara Saaray